Fogoow Subaga Buruurta: Ka dheeroow intaad awoodo cunto baruurta Isku inaad yarayso cuntada subaga markastood cunto soo iibsanayso inta ku jirta, caanaha subaha laga miirayna taxi inaad. Daawada laga ee steroids wuxuu keena waxyeelayn sidaas awgeed waxaa la oo keliya markii ay daawaynada kale la tijaabiyay. Dawaada afka laga qaato ee steroids wuxuu keena waxyeelayn sidaas waxaa la keliya markii ay kale la tijaabiyay. Sigaar is aged by haddii lagu, waxay halis saa'id oh ku jiraan inay qaadaan neef. Ogow waxyaabaha kiciyo neefta adigoo markii neefsashadaada sii xumaatey, ama isticmaalaayo qalabka cabbiraadka neef-baxsiga dheer markii raashin cunto qaadato oo aad u malayso inuu kugu kicinaayo neefta.
Haddii aad qabtid neef, neef-mareenada sambabahaaga (bronchi) ayaa aad ugu dareen badan kuwa caadiga ah, waxyaabo qaarkood ayaa feel-yeelayn kara, kuwaaso gaarsiinaayo xiiqlayn, qufac, xabadka oo adkaado iyo neefta oo kugu adkaato. Waxyaabaha kugu karo waxaa cayayaanka yar, ka ah xayawaanka - yar ee guriga laga helo, waxyaabaha geedaha soo baxo sigaarka qabow, iyo bukashada xabadka. Calaamadaha soo neefta ee u xun dhaqsi ah u si xumaadaan.
Haddii ay calaamadaha neeftaada ay ka duwan yahiin kuwa caadiga ah (uusan caadi ahayn) ama aad qabtid calaamado dheeri oh, waxaa laguu gudbin karaa qaybta X-ray-ga sidii raajo lagaa saaro xabadka. Haddii uu sii joogto ah kuu qabto, waxaa lagu siin doonaa inhaler cayilka kale ee ku jiro lagu magacaabo inhaled corticosteroid. Caadi lagula doonaa inaad labo qiyaas oo sidii hortago in neefta mar labaad dhaco.